albaabkii murugada..Ha Aqrin Shekadaan Hadii aad Qalbi Jilicsan Tahay, waan Hubaa in aad Ilmeyn Doonto | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada albaabkii murugada..Ha Aqrin Shekadaan Hadii aad Qalbi Jilicsan Tahay, waan Hubaa in aad Ilmeyn Doonto
Bulsha:- waxaan lahaa saaxiib aan ujeclaa si dheeraad ah. waxaa ifarax galin jiray aragtidiisa waxaana wehel ii ahaa imaanshihiisa waxaan ku gutay lasaaxiibistiisa waqti aad udheer. arrinkiisa waxna igama qarin jirin anigana sidoo kale ayaan u ahaa. ilaa aan safray safar fog. waan isku waraaqo dirnay inti muddo ah. intaa kadib waxaa iga go ay farriimihi aan kaheli jiray xaggiisa. waxaa ishaki galiyay waxa kudhacay saaxibkeey iyo sida xaalkiisu yahay. waan soo laabtay waxaana kadhigay hammigeyga midka ugu weyn inaan mar uun arko saaxibkeey. waxaan karaadiyay dhammaanba goobihi aan ku kulmi jirnay kamana helin. waxaan tagay hooygiisi dariskiisuna waxay ii sheegeen inuu ka guuray xaafadda waqti aad ufog aysanna garaneyn halka uu kudambeeyay. waxaan istaagay meel udhaxaysa rajo iyo quus dagaalamaya oo uu midkood ka guulaysanayo kan kale. waxaan yaqiinsaday inaanan maanta kadib aanan heleyn saaxibkey. waxaa indhaheyga kadaatay ilmo aanan kadaadanin illaa qof uu yaraaday nasiibkiisa saaxibtinimada mooyee.
waxaan ahaa mid ilaahay ballan kula gala hadduu arko qof murugaysan inuu istaago hortiisa istaagidda qof dadka wax tara. hadduu kari waayana ugu yaraan la murugooda. waxaan raacay wadadi ilaa aan kagaaray gurigi uu kasoo baxaayay codka uu aadaarku ku laranyahay. waxaan garaacay iridka garaacid ay turid kudheehantahay lamana furin. waxaan mar kale ugaraacay si xoog ah. waxaa iga furtay gabar aad uyar oo uu sigayo cimrigeedu inay kasiibato da deeda sanadi tobanaad. waxaan ku arkayay tooshka yar ay gacanta kuhayso dharkeeda jeex jeexan ayadoo u eg sida dayaxa oo lagu daboolay daruurta.
waxaan weydiiyay.. qof jirran miyaa agtiina ahaaday? way qeylisay qeylo uu udhowaanayo inuu la go o halbowlaha wadnaheeda waxayna tidhi
“muddon toban sano ah kahor aniga iyo hooyaday waxaan daganayn guri. waxaan lahayn daris kamid ah kuwa hanitida iyo nimcada rabbi kumannaystay. dariskaas gurigoodu waxa uu garbihiisa kusoo dhowaynayay gabar aysan qasriyada iyo guryaha boqoradu aysan soo dhoweyn ayada oo kale wanaagga bilicda dabacsanaanta iyo quruxda daraadeed. waxaa nafsaddeyda xanuujiyay jacayl aan uqaaday daraadeed waxaan awoodi waayay inaan lasabro. kama suulin inaan ula imaanayo qaab walba oo aan ugu gudbin karo dareenkeyga qalbigeeda. jeer aan ugu dambeyn ballan ugu qaaday inaan guur diyaar u ahay. waxaana isku keey dhiibay hoggaankeedi. wax walbana way iga ogolaatay. waxaan ku boobay sharafteedi iyo qalbigeediiba hal maalin oo qura.
kama soo wareegin maalmo badan marki aan ogaaday in caruur yari ay isku gadgaddinayaan caloosheeda dhexdeeda. waxaan bilaabay inaan ku shakiyo inaan u oofiyo ballanti aan kaqaaday iyo inaan ujaro xiriirka naga dhaxeeya. waxaana doortay arrinta dambe. waxaana kasoo haajiray gurigi aan booqan jiray ilaa maantadan lajoogana wax war ah kama haayo. waxaa kasoo wareegtay dhacdadaas sanado badan. maalin maalhana kamid ah waxay gabadhi iigu soo dirtay boostada waraaq”